भोलि निर्जला एकादशी ! हरेक मनोकामना पूरा गर्नको लागि अपनाउनुहोस् यस्तो उपाय ! - BigulNews
निर्जला एकादशीको व्रत बस्नको लागि बार्हौ एकादशीमा अत्तिनै उत्तम मानिन्छ । निर्जला एकादशी पुजाको महिमा विष्णु पुराणमा पाइन्छ। निर्जला एकादशीको व्रत ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी अर्थात् २३ जून २०१८ (शनिवार) को दिन पर्छ । वर्त सम्पन्न भैसकेपछि पूजा गर्ने बेलामा आफुले मनमा सोचेका कुरा पुरा हुने विश्वास चलीआएको छ ।
निर्जला एकादशीको व्रत बस्दा पानी सम्म पिउन नहुने कुरा धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ । यसका अनुसार वर्त बस्ने मान्छेले यस समयमा केही आफुले चिताएका कुरा सम्झिन जरुरि छ ।
निर्जला एकादशीको वर्त बस्ने मान्छेहरुले दशमीको रात एकादशी व्रतको संकल्प गर्नु पर्दछ र अन्तिममा पूजा नगरेसम्म पानी पनि नखाई वर्त बस्नु पर्छ । निर्जला एकादशीको दिन बिहानै चोखो पानीले नुहाई कपडा फेर्न जरुरि छ ।
निर्जला एकादशीको शुभ अवसरमा, आफ्नो घरमा वा मन्दिरमा भगवान विष्णु पूजा गर्नुहोस्। पुजाको समयमा भगवान बिष्णुलाई मनपर्ने पहेंलो रङ्गको कपडा चडाएर पूजा गर्नु होला । यस दिनमा तपाईले भगवान विष्णुको कथा सुन्नु पर्छ।
निर्जला एकादशीको अर्को नाम भिम एकादशी हो । त्यसैले यस दिन, वायु पुत्र भीमको पनि पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्जला एकादशीको दिन ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ यो मन्त्रको जप गर्नुहोस । पूजा गर्दा राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु को मुर्ति वरिपरी राखेर पूजा गर्नुहोस । यसो गर्दा झन् राम्रो हुने कुरा उल्यख छ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असार ०८, २०७५१५:५५
भोलि जेठ २५ गते शनिबार, तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !